Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Mohamed Makawi Ibrahim Mohamed
Nidaamka sharciga ee Sudaan shan nin ayuu maxkamad ku qaadey oo lagu helo dambi ah in ay lug ku la’haayeen dilalka. Abdelraouf Abu Zaid Moxamed Hamza, Moxamed Makawi Ibrahim Moxamed, Abdelbasit Alhaj Alxassan Haj Hamad, iyo Moxanad Osman Yousif Mohamed waxaa lagu xukumey dilalmis ah, laakiin xabsigii wuu ka baxsaday sanadkiisii koowaad ee xukunkiisa dembiga. Waxaa la soo sheegey in Mohanad uu Maajo 2011 Soomaaliya ku dhintey. Abdelraouf mas’uuliyiinta Sudaan ayaa gacanta ku dhegtey. Makawi iyo Abdelbasit ilaa iyo hadda waa la la’yahay.
Makawi wuxuu gacan-qaad la leeyahay koox Sudaan oo lagu magacaabo al-Qaidada the Land of the Two Niles, kuwaasoo qorsheeyey weerarkii Makeykanka, kuwa reer Galbeedka, iyo danaha Sudaan. Wuxuu ahaa hoggaamiyaha kooxda fulisay weerarkii dhacey Janaayo 1, 2008, oo waxaa lagu magacaabey inuu ahaa mid ka mid ah labadii qof ee dilalka geystey. Xabsiga Khobar ee Khartoum ayuu bisha Juun 11, 2010 ka soo baxsaday, Makawi Soomaaliya ayuu qabtey.
Taariikhda Dhalashada: Janaayo 1, 1984
Magacyada La Sheegto: Muhammad Makkawi Ibrahim Muhammad